CHP waxay ku baaqeysaa in lagala wareego buundooyinka muranka dhaliyay, jidadka waaweyn iyo tunburooyinka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulCHP waxay ku baaqeysaa in lagala wareego buundooyinka muranka dhaliyay, Wadooyinka waaweyn iyo tunburooyinka
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
La wareegida ayaa loogu tala galay buundada muranka badan dhaliyay iyo tunelada
Xisbiga Dadka Jamhuuriga (CHP) Kocaeli Kuxigeenka Tahsin Tarhan ayaa ku baaqay in la wareego Buundada Yavuz Sultan Selim Bridge, Waqooyiga Ring Ringway, Buundada Cusgazi iyo Gebze-Orhangazi-Izmir Motorway iyo Eurasia Tunnel.
Buundooyinka, burooyinka iyo wadooyinka waaweyn, ee lagu sameeyo habka wareejinta-ku-wareejinta moodalka oo sababa malaayiin lira ah badbaadada khasnadda sababtoo ah dammaanadda kala-guurka, ayaa maalin walba culeys badan ku noqda gobolka.
Buundada Yavuz Sultan Selim waxaa la siiyay 2019 bilyan 3 milyan oo liras ah sanadka 50, Cusbitaalka Osmangazi waxaa lasiiyay 2016 bilyan 2019 milyan liras intii u dhaxeysay 3-799.
Ku-xigeenka Kobaneli ee Tahca Tarhan, afhayeenkaBayaanka laga soo bilaabo Deniz illaa Deniz Ayhan wuxuu ku baaqayaa in si ku meelgaar ah loogu wareejiyo Buugga Yavuz Sultan Selim, Waqooyiga Ring Ring, Cusbatazi Bridge iyo Gebze-Orhangazi-Izmir Motorway iyo Eurasia Tunnel.
“SIYAASADU WAA IN LAGU BIXIYAY LACAGTA LACAG LA'AAN AHAAN DIINTA BASKA AH”
Nasiib darrose, ma jiro nidaam loo adeegsan karo is-wareejinta-wareejinta danaha guud. Waxaan si joogto ah u dhaawaceynaa. Dawladdu waa in ay asturisaa waddooyinkaas iyo buundooyinka oo ay iibsataa dhammaantood. Waxaan yareyn doonaa qiimaha waxaanan bilaabeynaa inaan macaash sameyno marka kaararka baasku kaco, ugu yaraan waxaan ka takhalusi doonaa culayska bixinta bixinta gawaarida aan dhaafin. Khasaaraha dadweynaha waxaa sababay dhammaan buundooyinka oo dhan. Bilyanno lira ayaa la bixiyaa dammaanadda xilliga kala guurka ee dhammaan buundooyinkaas iyo waddooyinka waaweyn. Buundo ayaa lagu sameyn karaa lacagta lagu bixiyo dammaanadda kaarka.
“WAA KU SAABSAN SHAQAALAHA KU SAARAN Suuqa Suuqa”
Nidaamka gaadiidka ayaa leh dhibaatooyin waaweyn sababta oo ah qiimaha isgoysyada buundooyinka. Waxay dhaheen waxaan ku yareeyay baydhabo shan daqiiqo, laakiin cidina ma isticmaasho buundada. Warshadaha gawaarida xamuulka iyo nidaamka gaadiidku waxay si ba'an u saameeyaan siyaasada qiimaha badan; Tani waa mid saameyn ku yeelata iyada oo badeecad kasta oo suuqa lagu iibiyo kor loo qaado. Dabcan, alaabooyinka oo dhami way xidhan yihiin.
Doodda gawaarida wadada ayaa ka jawaabaysa magaalada Brussels
Goobta la wareegidda ee ka soo baxa buundada saddexaad
3. Go'aanka ah in lagu dhaqmo buundada
Qiimaha lacag-bixinta Eurasia Tunnel
Qiimaha kala-guurka Cusmaaniga
Mashaariic dhisme-wareejin ah
Qiimaha kala guurka Yavuz Sultan Selim Bridge